अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छैनन् बहुसंख्यक विद्यार्थी – Yug Aahwan Daily
अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छैनन् बहुसंख्यक विद्यार्थी
युग संवाददाता । २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:२४ मा प्रकाशित
997 पटक हेरिएको
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस जाजरकोटकोटमा लकडाउनपछि स्नातक तहको पठनपाठन पूर्णरुपमा बन्द छ । कोरोनाको त्राससँगै अधिकांश विद्यार्थी गाउँ पसेका छन् । जहाँ फोन र विजुली भरपर्दो छैन । यस्तो बस्तीमा रहेका विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षामा सहभागि हुन सम्भव नै छैन । अधिकांश विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाको बारेमा जानकारीसम्म छैन ।
यही क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरु जो सदरमुकाम वरि परी र इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, एकदम कम मात्र विद्यार्थीले क्याम्पसले चलाएको अनलाइन कक्षा लिएका छन् । यही बिचमा विश्वविद्यालयले मिडटर्म परीक्षा लिने सूचना जारी गरिसकेको छ । तर अधिकांश विद्यार्थीलाई यही परीक्षा हुनेबारे पनि थाहा छैन । कारण उनीहरु टेलिफोन नै नलाग्ने गाउँमा छन् । न त उनीहरु अनलाइनको पहुँचमा नै छन् ।
यही विश्वविद्यालयको अर्को आंगिक क्याम्पस तिलाकर्णाली बहुमुखि क्याम्पस कालिकोटमा पनि लकडाउनपछि पढनपाठन बन्द छ । त्यहाँ अध्यनरत कुनै पनि विद्यार्थीहरु हालसम्म क्याम्पसले चलाएको अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका छैनन् । यस्तै सुर्खेतको जनता बहुमुखि क्याम्पस विद्यापुरमा अध्ययनरत ८५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु पनि अनलाइनको पहुँचमा छैनन् । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण चार महिनादेखि क्याम्पस बन्द छ ।
विद्यार्थीहरु घर गएका छन् । अधिकांशको घरमा विद्युत र नेटको सुविधा छैन । हाल स्नातक तह तेस्रो सेमेष्टरमा २५ प्रतिशत मात्रै कोर्ष पुरा भएको छ । प्रथम सेमेष्टरको कोर्ष पनि पुरा भएको छैन । तर विश्वविद्यालयले एकाएक अनलाइनबाटै मिडटर्म परीक्षा लिन उर्दी जारी गरेको छ । कोर्ष नै अगाडि नबढेको अवस्थामा क्याम्पस प्रशासन भने अलमलमा छ । त्यस्तै सुर्खेतकै भेरी क्याम्पस गुमीमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी इन्टर नेटको पहुँचमा छैनन् ।
पहिलो सेमेष्टरमा अध्यनरत कुल ६० जना विद्यार्थीमध्ये १०/१५ जना मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन्छन् । अधिकांशले चाहेर पनि इन्टरनेटको पहुँचमा नहुँदा अनलाइन कक्षा लिन पाएका छैनन् । लकडाउनका कारण आंगिक क्याम्पसमा मात्र होइन, वीरेन्द्रनगरमा रहेको केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनरत सिमित विद्यार्थी मात्रै अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरु अहिले गाउँमा छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा भएका विद्यार्थी पनि विद्युतको अनियमितता र मोवाइलमा टाटा लिने पैसा नहुँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी छैनन् । अनलाइन कक्षामा सहभागि भइरहेका विद्यार्थीलाई पनि प्राध्यापकहरुले नियमित पढाउन सकेका छैनन् । तर यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले विद्युतिय माध्यम (अनलाइन र अफलाइन) बाट मध्यवर्ती (मिडटर्म परीक्षा लिने तयारी थालेको छ । कोर्ष पुरा नहुँदै कोरोना महामारीकै बिचमा विश्वविद्यालयले विद्युतिय माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुले अनलाइनबाट परीक्षामा सहभागि हुनसक्ने अवस्थासमेत नरहेको गुनासो गरेका हुन् । साथै लकडाउन अवधिमा क्याम्पस बन्द भए पनि शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको विद्यार्थीले बताएका छन् । तर कोरोना कारण विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा क्याम्पसमा उपस्थित भई परीक्षा दिन असम्भव भएको भन्दै मध्यवर्ती परीक्षा विद्युतीय माध्यमबाटै सञ्चालन गर्न लागिएको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख डा. आनन्दप्रसाद सुवेदीले बताए ।
प्रश्नपत्रको ढाँचा भने वस्तुगत, विषयगत र प्रोजेक्टवर्कमा आधारित हुने उनको भनाइ छ । अनलाइन कक्षाबाट कोर्ष पुरा भएका विद्यार्थीहरुले भने स्वतः अपग्रेड (अर्को सेमेष्टर) मा अध्ययन गर्न पाउने छन् । तर अपग्रेड गरिएका विद्यार्थीहरुले भने कोरोनाको सामान्य अवस्था आएपछि बार्षिक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ । त्यही परीक्षाको नजिता अनुसार नै सेमेष्टर पास/फेलको निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयले निर्णय गरेको छ । तर अधिकांश विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेको देखिएको छ ।
‘अनलाइन कक्षा प्रभावकारी छैन परीक्षा लिने निर्णय रद्द हुनुपर्छ’
कोरोना महामारीका बिच विश्वविद्यालयले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्दै अनलाइन र अफलाइनबाट परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । तर हचुवाको भरमा परीक्षा लिन खोजिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले यसको विरोध गर्न थालेका छन् । लकडाउनका कारण कोर्ष नै पूरा नभएको र अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लिइने परीक्षा सान्दर्भिक नहुने विद्यार्थीहरुको तर्क छ ।
‘जाजरकोटका सबै ठाउँमा फोन नै लाग्दैन, आधा कोर्ष पनि पढाइ भएको छ्रैन’ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस जाजरकोटका स्ववियु सभापति प्रदिप खड्का भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षा नाम मात्रका हुन्, अधिकांश विद्यार्थी सहभागि नै हुन सकेका छैनन् । क्याम्पस बन्द भएको अवस्थामा नपढाएरै परीक्षा लिने निर्णय विश्वविद्यालयले तत्काल रद्द गर्नुपर्छ ।’
यस्तै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति झक्कबहादुर शाहीले पनि दुर्गमका क्याम्पसहरुमा अनलाइन कक्षा सम्भव नभएको बताए । विद्युत, इन्टरनेट र टेलिफोनको भरपर्दो सेवा नभएको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । लकडाउनभर विश्वविद्यालय बन्द भएको र अहिले मासिक शुल्क असुल्नका लागि मात्र मिडटर्म परीक्षाको रणनीति अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । अधिकांश स्थानमा सम्भव नै नभएको अनलाइनबाट मिडटर्म परीक्षा लिनुभन्दा अब विश्वविद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर सेमेष्टर नै अपग्रेडिङ गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तै अनेरास्ववियू सुर्खेतका सहसंयोजक जगत ढकालले पनि लकडाउनमा पढ्नै नपाएका विद्यार्थीको अनलाइनबाटै परीक्षा लिने निर्णय विद्यार्थीहरुको हितमा नभएको बताए । ‘वीरेन्द्रनगर बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी छैनन्, वीरेन्द्रनगरमै पनि विद्युत र इन्टरनेटका कारण धेरैले अनलाइन कक्षा लिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जबर जस्ती अनलाइनबाट परीक्षा लिन खोज्नु विद्यार्थीको हित विपरित छ’ ढकाल भन्छन्, ‘लकडाउनको समयमा अनलाइन कक्षा वैकल्पिक माध्यम भए प्रभावकारी छैनन् ।’
अनलाइन प्रणालीमा नगइ सुखै छैन
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह विश्वविद्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लिनैपर्ने अडानमा छन् । पढाउन अल्छी गर्ने प्राध्यापक र पढाइमा रुचि नभएका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाको विरोध गरिरहेको उनको आरोप छ । २१ औँ सताब्दी सुहाउँदो शैक्षिक प्रणालीका लागि अनलाइनको माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो २१ औं सताब्दी हो, कर्णालीका सबै जिल्लामा अनलाइनबाट पठनपाठन सम्भव छ’ उपकुलपति सिंह भन्छन्, ‘अल्छी र प्रविधिको ज्ञान नभएकाहरुले मात्र यो सम्भव नदेखेका हुन् । कतिपय प्राध्यापक र पढाइमा रुचि नभएका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षामा रुची देखाएका छैनन् ।’
अहिले अधिकांश विद्यार्थी र शिक्षकको हातमा मोवाइल रहेको भन्दै उनले कोरोना संक्रमणका कारण पनि विश्वविद्यालय अनलाइनमा जानुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयको पढाइ नरोकिने उनको भनाइ छ । मोवाइलमा रिचार्ज गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि क्याम्पसले नै डाटाप्याकेज उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।